CHITSVA KUSVIRA Fekitori - China KUSVIRA KUSVIRA Vagadziri, Vatengesi
Anti-kutonhora Carton SealingTape
Kuisa chisimbiso tepi kunozivikanwa seBopp tepi uye kurongedza tepi Iyo inokodzera kuchengetedza zvinhu mumatura, kuendeswa kwemidziyo, uye kudzivirira kuba uye kuvhurwa zvisiri pamutemo kwezvinhu. Inogona kudzivirira kubvaruka kwechigadzirwa kana kukuvara panguva yekufambisa, iine chimwe chimiro chehuscosity yakasimba, kugona kugona, hapana zvakasara, zvakare kurongedza kwakachipa.
Anofema anotambanudza firimu
Iyo yakasimbiswa yekufema inotambanudza firimu ine hove-senge yekufema maburi pamusoro, iyo inogona kumhanyisa kutenderera kwemhepo uye kugadzirisa matambudziko mazhinji senge nyore kutambira gasi rinokura, hunyoro, huwori, chakuvhuvhu kana kudzikamisa, kuitira kuverengera kutsva kwe zvigadzirwa zvekudya. Panguva imwecheteyo, yakasarudzika inosimbisa fiber yeiyo yekufema membrane inogona zvakare kudzivirira iyo membrane kubva kuputika uye nekupa zvirinani kutakura kutakura kugona.
Panguva imwecheteyo, iyo inofema kutambanudza firimu ine zvakanakira kureruka uremu, kusimba kwakanaka, mweya kukwana kwe80%, yakaderera kurongedza mutengo, uye kugadzirisazve. Inoshandiswa zvakanyanya mukudya uye chinwiwa, zvigadzirwa zvemukaka, chikafu chechipfuwo, petrochemicals, mishonga yezvigadzirwa, misika yezvigadzirwa zvekurima, misika yebindu, misika yemaruva, nezvimwe.
Nyore misodzi yekumisikidza tepi
Anti-ultraviolet kuvhara masking
Masking tepi ine hunhu hweyakanyanya tembiricha kuramba, kumira kwakanaka kumakemikari solvents, yakakwira adhesion, yakapfeka mbatya uye hapana yakasara glue mushure mekubvarura.Iyo yakakodzera kune ese marudzi eshongedzo indasitiri, zvemagetsi indasitiri, indasitiri, shangu uye kumwe kushandiswa, nezvakanaka kuvhara uye kuchengetedza.